pabiak – Politics lam thu ka uar. Technologyabik tak in mobile tech, create application le ebook tuah ih digital marketing lam zir hi ka tui bik mi asi.
ကိုယ်တော်သည် သင်၏စိတ်နှလုံးကို အကြွင်းမဲ့ ယုံကြည် ကိုးစားစေလိုသည်။
Posted on August 29, 2016 Categories UncategorizedLeaveacomment on မင်းအကြောင်းအိမ်မက်
အကြွင်းမဲ့ ယုံကြည် ကိုးစားစေလိုသည်။
Format StatusPosted on August 29, 2016 Categories politics1 Comment on မင်းအကြောင်းအိမ်မက်
Lwin Pyin | လွင်ပြင် သတင်း / 8 hours ago
လူတိုင်း သဘောင်္သီးမှည့်စားမယ်ဆိုရင် အရင်ဦးဆုံး အစေ့တွေကို ဖယ်ပြီးမှ စားလေ့ရှိပါတယ်။ အမှန်တကယ်တော့ သဘောင်္သီးစေ့တွေဟာ ကျန်းမာရေးအတွက် အထူးကောင်းမွန်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကင်ဆာရောဂါဆဲလ်ပြန့်ပွားမှုကို ကာကွယ်တားဆီးပေးနိုင်ပါတယ်။
သဘောင်္သီးစေ့ကို ဒီအတိုင်းဝါးစားနိုင် ပါတယ်။ အရသာက ခါးသက်သက်ရှိတာကြောင့် အချို့လူတွေကတော့ နွားနို့ သို့မဟုတ် ပျားရည်တို့နှင့် တွဲဖက်စားသုံးကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နို့တိုက်ကျွေးနေသော မိခင်များနှင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေကတော့ သင်္ဘောသီးစေ့ကို မစားသုံးသင့်ပါဘူး။
(၁) အစာချေမှုစနစ်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ခြင်း သင်္ဘောသီးမှာ ပါဝင်တဲ့ အင်ဇိုင်းဓာတ်တွေဟာ အစားအစာမှာပါဝင်တဲ့ အသားဓာတ် ( ပရိုတင်းဓာတ်) ကို ကောင်းမွန်စွာ ချေဖျက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင်္ဘောသီးစေ့ကို စားသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အထောက်အကူလည်းဖြစ်စေပြီး ကြွက်သားဆဲလ်များကိုလည်း ကျန်းမာစေပါတယ်။
(၂) ကင်ဆာရောဂါဆဲလ်ပြန့်ပွားမှုနှုန်းကို လျှော့ချပေးနိုင်ခြင်း သင်္ဘောစေ့တွင် ပါဝင်သော Isothiocyannates ဓာတ်သည် အသားပိုထွက်ခြင်းနှင့် ကင်ဆာဖြစ်စေသောဆဲလ်ပြန့်ပွားမှုနှုန်းများကို အများဆုံး လျှော့ချပေးနိုင်ပါသည်။ ထို့ပြင် သဘောင်္သီးစေ့အား သာမာန်ထက် ပိုမိုစားသုံးလျှင် သွေးကင်ဆာရောဂါ၊ အဖိုသုတ်ရည်ဂလင်းကင်ဆာရောဂါ၊ အူမကြီးကင်ဆာရောဂါ၊ ရင်သားကင်ဆာနှင့် အဆုတ်ကင်ဆာဆဲလ်များ ပြန့်ပွားမှုများကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါသည်။
(၃) အသည်းရောဂါကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်း အရက်သေစာများကို အလွန်အကျွံသောက်သုံးလျှင်၊ အသည်းရောင်နာ B C စသော ရောဂါခံစားရလျှင် အသည်းဆဲလ်များ ပျက်စီးပြီး Cirrhosis ဟုခေါ်သော အသည်းဆဲလ်ပျက်စီးခြင်းရောဂါများကို ခံစားရနိုင်ပါသည်။ ထိုရောဂါကို ခံစားရပြီဆိုလျှင် သဘောင်္သီးစေ့ ၅ စေ့ ၆ စေ့ကို ကြိတ်ပြီး သံပရာသီးဖျော်ရည်ထဲသို့ ထည့်သောက်လျှင် အသည်းရောဂါကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အသည်းရောဂါကို ခံစားနေရလျှင် နေ့စဉ် ယခုကဲ့သို့ ပြုလုပ်ပြီး လအနည်းငယ်အထိ သောက်သုံးပေးသင့်ပါသည်။ ထိုသို့ သောက်သုံးခြင်းဖြင့် ပျက်စီးနေသော အသည်းတစ်ရှူးများကို ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေပါသည်။
(၄) ကျောက်ကပ်ရောဂါအတွက် ဆေးကောင်းတစ်လက် ကျောက်ကပ်တွင် အဆိပ်အတောက်များ စုပုံလာသည့်အခါ ကျောက်ကပ်သည် ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်မလုပ်နိုင်သည့်အခါ ကျောက်ကပ်ရောဂါဝေဒနာများကို ခံစားရပါသည်။ ထိုသို့ ကျောက်ကပ်တွင် အဆိပ်အတောက်များ စုပုံလာခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်ရန် သဘောင်္သီးမှည့်အစေ့ကို စားသုံးပေးသင့်ပါသည်။
(၅) သေးငယ်လွန်းသည့် ရောဂါပိုးမွှားများမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်း သဘောင်္သီးစေ့သည် အလွန်သေးငယ်သော၊ လူတို့၏ မျက်စိဖြင့် မမြင်နိုင်သော ရောဂါပိုးမွှားများအန္တရာယ်မှ အထူးကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ – တိုက်ဖွိုက်ရောဂါ ကဲ့သို့သော ရောဂါများအတွက် အထူးကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့် သဘောင်္သီးစေ့များကို ကြိတ်ချေပြီး နွားနို့နှင့် တွဲဖက်၍ သောက်သုံးပေးနိုင်ပါသည်။
(၆) ကပ်ပါးကောင်၊ သန်ကောင်များကို သေစေနိုင်ခြင်း ဝမ်းတွင်းရှိ သန်ကောင်များကို သေစေနိုင်သည့်အတွက် ကလေးငယ်များကို တစ်ခါတစ်ပတ် သင်္ဘောသီးမှည့်နှင့် အစေ့များကို ဖျော်ရည်ပြုလုပ်ပြီး တိုက်ပေးသင့်ပါသည်။ ထိုသို့ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ကလေးများ၏ အူများတွင် တယ်ကပ်နေနိုင်သော သန်ကောင်များကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါသည်။ သို့သော် အရမ်းငယ်လွန်းသေးသော ကလေးငယ်များကို သင်္ဘောသီးစေ့ဖျော်ရည်တိုက်ကျွေးခြင်းများကို ရှောင်ကြဉ်ရပါမယ်။ မိမိဘာသာအိမ်တွင် စားသုံးမည်ဆိုလျှင်ပင် ဆရာဝန်နှင့် သေချာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးမှသာ သင်္ဘောသီးစေ့စားသုံးခြင်းကို ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။
Posted on August 29, 2016 August 29, 2016 Categories UncategorizedLeaveacomment on ကင်ဆာဆေးဖက်ဝင် သဘောင်္စေ့
သခင်အောင်ဆန်း နိုင်ငံရေး မလုပ်ခဲ့ဘဲ
ဘယ်အစိုးရတက်တက် ၊ ကိုယ့်ထမင်း ၊ ကိုယ်စားနေတာဆိုပြီး နေခဲ့မယ်ဆိုရင်
မြန်မာပြည် လွတ်လပ်ရေး ရရန်မရှိပါ။
အေဗရာ ဟမ်လင်ကွန်း နိုင်ငံရေးကို
ကိုယ်လုပ်မှ ကိုယ်စားရတာ ဆိုသည့်
ခပ်တိမ်တိမ် အတွေးအခေါ် ရှိခဲ့ပါက
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုတွင် ကျွန်စနစ်
တည်မြဲကောင်း တည်မြဲ နေနိုင်ပါသည်။
ဂန္ဒီကြီး ရှေ့နေအလုပ်ဖြင့် ငွေဝင်လမ်း
ကိုယ်လုပ်မှ ကိုယ်စားရတာ ဆိုပြီး ခပ်ပျော်ပျော်
နေခဲ့ပါလျှင် အိန္ဒိယပြည်လည်း လွတ်လပ်ရေး
ရချင်မှ ရပါလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် ကိုယ်မလုပ်နိုင်လျှင်
မလုပ်ရဲသေးလျှင် လုပ်နိုင်သူများ ကောင်းရာကောင်းကြောင်း…..အပြည့်အစုံဖတ်ရန် Download ကိုနှိပ်ပါ
Format StatusPosted on May 2, 2016 Categories politicsLeaveacomment on
01. Smokie – I’l…ht.mp3
02. Linda Ronsta…OU.mp3
03. Glenn Frey -…wn.mp3
04. The Police -…KE.mp3
05. Leo Sayer – …OU.mp3
06. Eagles – TEQ…SE.mp3
07. နှလုံးသား အ…်း.mp3
07. Bee Gees – H…ve.mp3
08. Rod Stewart …ve.ကျော်ဟိန်းmp3
09. Rod Stewart …ng.mp3
09. ပုလင်းပေါ်ကြ…ား.mp3
10. John Lennon …ne.mp3
11. Rod Stewart …st.mp3
12. Kansas – Dus…nd.mp3
13. Crystal Gayl…ou.mp3
14. Cliff Richar…it.mp3
15. Blancmange -…on.mp3
16. Cliff Richar…ne.mp3
17. CCR – Pagan Baby.mp3
18. Queen – I Wa…ee.mp3
19. The Doors – …rm.mp3
20. Michael Semb…ac.mp3
21. J.D. SOUTHER…LY.mp3
22. Nazareth – L…ts.mp3
23. Fleetwood Ma…un.mp3
23. လျှို့ ဝှက်ခ…ွာ.mp3
24. CCR – Cotton…me.mp3
25. CCR – Susie Q.mp3
26. John Fogerty…ad.mp3
26. မြင်သော ငိုေ…ုး.mp3
27. Dire Straits…ng.mp3
Format StatusPosted on April 29, 2016 Categories politicsLeaveacomment on